नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गर्यो । देशको सामाजिक व्यवस्था समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्यो । संविधानले नै समानता , स्...
शिक्षा र सीप विकासको चुरो पक्ष सिकाइ हो । सिकाइ विनाको पढाई प्रतिफल विनाको लगानी मात्र हुन्छ । सिकाइका सिद्धान्तहरुको विकास र त्यसको प्रयोगको शिलशिला चल्दै आएको छ । तर पनि के सिक्ने ? किन सिक्ने ? कसर...
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा १२ सम्म ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस मध्ये बालविकासमा ११ लाख, ५५ हजार ६१, आधारभूत शिक्षा कक्षा १ देखि ८ सम्म ५३ लाख १...
सम्पादकीय नोट : कोरोना भाईरस (कोभिड -१९) का कारण आएको असहजतामा बालबालिकाको सिकाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने ? कसरी शिक्षक र सम्बन्धित निकायलाई यस प्रति जिम्मेवार बनाउने ? यस सन्दर्भमा संसारमा के कसर...
बालबालिकाको सिकाइ सहजिकरणमा स्थानीय सरकारका अभ्यास
सम्पादकीय नोट : कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) का कारण आएको असहजतामा बालबालिकाको सिकाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने ? कसरी शिक्षक र सम्बन्धित निकायलाई यस प्रति जिम्मेवार बनाउने ? यस सन्दर्भमा संसारमा के कस...
वैज्ञानिक शिक्षा नीतिको खाँचो
विद्यालय तहको शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रबन्धको थालनी त भएको छ तर पर्याप्त विस्तार तथा पहुँच पुगेको छैन । माध्यमिक तहको साधारण शिक्षा लिएका विद्यार्थीलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय...
चार सय वर्ष वृद्ध पाठशालाका शिष्यलाई पत्र
प्रिय शिष्य । न्यानोमाया । बिगत ६ महिना यता देखि तिमीहरुसँग भलाकुसरी गर्न नपाउँदा न्यास्रो लागेको छ । त्यो कुरा मनमा खेलाउँदा खेलाउँदै आज मनका कुरा लेख्न मन लाग्यो ! तिमीहरु भौतिक रुपले द...
इतिहास आधुनिक नेपालको शिक्षा विकासकालागि २००७ सालको परिवर्तन तथा यसकालागि लागि पर्ने अभियन्ताहरु नै मूख्य कारक रहेका छन् । त्यति बेलाको शिक्षा साक्षरता वृद्धि गर्ने उद्देश्यमा वढी केन्द्र...
शिक्षा सेवा आज पनि अछुत झैं देखिन्छ । प्राविधिक भनिने तर प्रशासनिक काम नै गर्नुपर्ने यो सेवाका कर्मचारीहरु प्रशासन सेवाका कर्मचारीका सेवक मात्र मानिदै आएका छन् । बेला,बेलामा निर्वाचन लगायत...
कोभिड - १९ महामारीका कारण चालु शैक्षिक सत्र कहिलेबाट शुरु हुन्छ भन्ने दुई महिनाको अन्योल पछि सरकारले असार १ गतेबाट लागू हुने गरी वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरे...
कोभिड १९ का कारण हाल विश्वभर लाखौँ बालबालिका शैक्षिक वृत्ती र विकासबाट वञ्चित भएका छन् । विश्वभरी विद्यालय खुल्ने र बन्द हुने क्रम जारी छ । कतै खोलिएका विद्यालय बालबालिकामा संक्रमण पछि फेरी बन्द भएका...
मुलुकमा शिक्षा पद्धति र शैक्षिक आर्थिक लगानीका स्रोतहरु वैज्ञानिक निर्धारण अनिवार्य हुनै पर्दछ । जनताको विश्वास तथा गुणात्मक शिक्षा प्रवन्धका लागि समाजका धनीमानीदेखि सामान्य तथा विपन्न नागरिकका सन्तान...
शिक्षा ऐनको अभावमा शैक्षिक अराजकता
आउँदो असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुरा हुँदै छ । ऐतिहासिक संविधानभाबाट जारी भएको उक्त संविधान सँगै मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएको छ, संविधानले संघीय इकाईहरु बिच अधिकारको ब...
केही समय पहिले नेपालमा शैक्षिक विषयमा फिल्म बनेनन् भन्ने एउटा बहस आएको थियो । बनेका केही फिल्मको त्यति चर्चा भएन । दीपकराज गिरीको छक्का पञ्जा ३ मा भएको शैक्षिक विषयले पनि राम्रै चर्चा पायो । फिल्मले प...
विद्यालयका साझा समस्या : जिम्मेवार र दोषी को ?
शिक्षाका सवालमा प्रसस्तै सुनिने वाक्य मध्ये एउटा हो – सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय छैन । प्रायः शिक्षकरुले पढाउदैनन्, राजनीति गरेर बस्छन्, शिक्षकहरू बसी बसी तलब भत्ता लिन्छन् सुतेरै...